AH: December 2011
2011 ရဲ့ ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်နိုင်သူများ ၁၀၀ ထဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကမ္ဘာကျော် Times Magazine ရဲ့ ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူများ အယောက် ၁၀၀ ထဲမှာတော့ ဒီနှစ် ၂၀၁၁ အတွက် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နာမည် အစဉ်အလိုက် စီထားတဲ့အထဲမှာ နံပါတ် ၁၈ ရောက်မြောက်အဖြစ် ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒါဟာ ဘားရက်အိုဘားမား၊ ဟီလာရီကလင်တန်၊ မီရှလ် အိုဘားမားတို့ရဲ့ အထက်မှာ ပါဝင်လာတာပါ။ ကမ္ဘာကျော် လူမှု့ရေးကွန်ယက်ကို စတင်တည်ထောင်သူ မက်ဇူကာဘက်ကတော့ အဆင့် ၆ နေရာမှာ တွေ့ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းရေးထားတာကတော့ အသက် ၆၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အန်တီစုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော ၁၉၉၁ ခုနှစ် နိုဘယ်ဆုရှင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အာရှတိုက်ရဲ့ ဟီးရိုး တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ လူတွေကို ဇွဲမလျှော့ပဲ အားတက်စေအောင် လှုံဆော်နိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ညွှန်းထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရေးထားသူကတော့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၀မ်တန် ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အဆိုအရတော့ မစ္စတာဝမ်ဟာ ၁၉၈၉ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ပြောင်းလည်းရေးလှုပ်ရှားမှု့ဖြစ်တဲ့ တီယန်နန်မန် လှုပ်ရှားမှု့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြင့် လှုပ်ရှားသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး နောက်တစ်နှစ်မှာ တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားတာကို သူ့အခုအထိ မှတ်မှတ်ရရရှိနေတုန်းပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလတုန်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၇ နှစ်လောက် ကျခံနေရတဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေပြီး ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 12/28/2011 10:39:00 AM9comments
Aurelia Matias လို့ခေါ်တဲ့ အသက် ၇၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်က ဘွားဘွားဟာ သူမရဲ့ခင်ပွန်း ပျောက်ဆုံးသွားလို့ ၀မ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဟာ မှတ်ဥာဏ် ချို့ယွင်းပြီး သတိမေ့တဲ့ ရောဂါကို ခံစားနေရသူပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ကြံရာမရတဲ့အဆုံး သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဓာတ်ပုံကို ကျောမှာကပ်ပြီးတော့ ရှာပုံတော်ဖွင့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကို အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာလေးက ဖဘ ပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ အသက် ၇၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဘွားအိုရဲ့ ယောင်္ကျား Luis Matias ကို ရှာဖွေမတွေခဲ့ပါဘူး။ အဘိုးအိုဟာ မနီလာမြို့မှာ လမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် Facebook ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ၂ရက်အတွင်းပြန်ရှာတွေ့နိုင်ခဲ့ပါသတဲ့။
အသက် ၄၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Avancena လို့ခေါ်တဲ့ သမီးဖြစ်သူကတော့ “ကျွန်မတို့ဟာ Facebook ကို သုံးတောင်မသုံးတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုလိုအဖေ့ကို ပြန်တွေ့ရတော့ ဒီလို ဓာတ်ပုံကို ဖဘ ပေါ်တင်ပေးတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်၊ ခုတော့ ကျွန်မ အမေလည်း အရမ်းကို ပျော်နေတယ်။ သူက အဖေ့ကို ထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ ထင်နေတာလေ”လို့ ပြောသွားပါတယ်။
အဘိုးအိုကိုတော့ သူ့အိမ်နားကနေ နာရီဝက်လောက်သွားရတဲ့နေရာလေးက ပန်းတွေထားတဲ့ ပုံးကလေးအနီးမှာ ပြန်တွေ့ခဲ့တာပါ။ ဒီဓာတ်ပုံကလေးကို Facebook ပေါ်မှာ အကြိမ်ပေါင်း ၆သောင်း ၁ ထောင်ကျော် ဖြန့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။
Posted by Aung Htut at 12/27/2011 10:49:00 PM9comments
ရွှေပြည်ကြီးက ဝေးသနှင့်။ မပြန်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပေါ့။ ပြန်ချင်တာကလည်း တစ်ပိုင်းကိုသေလို့။ ခုတော့ အရှင်လတ်လတ်ကြီးနဲ့ ပြည်တော်ပြန်ရပါတော့မည်။ ပျော်သလိုလို၊ ၀မ်းနည်းသလိုလို။ ပျော်တာကတော့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရလို့။ ၀မ်းနည်းတာကတော့ ကုန်သွားတဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေကိုပါ။ အိမ်ကရှု့မငြီးရဲ့ ပတ်စပို့က ၆ လကျော်ကျော်ကျန်တော့သမို့ အသစ်လည်းစရာရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အကျွန်ုပ်က အခွန်တော် ဆောင်မှသာလျှင် ဘားကုဒ်ပါတဲ့ ပက်စပို့အသစ်ကလေး သူ့လက်ထဲရောက်မှာဖြစ်လေတော့ အခွန်ဆောင်၊ သူ့အတွက် ပက်စ်စပို့အသစ်ထုတ်နဲ့ ပိုက်ပိုက်လေးတွေ ပါသွားတယ်။ သြော်.. သမ္မတ အသစ်ကြီးက နိုင်ငံတော်ကြီးကို တိုးတက်အောင် ကြံဆောင်နေလေတော့လည်း ပစ္စရောဟောတု မဟုတ်လောက်ပါဘူးလို့ ဖြေသိမ့်လိုက်၊ ဖြေသိမ့်လိုက်နဲ့ ၀ိုင်ဝိုင်းသချင်းလေးဆိုရင်း ကိုယ့်ကိုကို ဖြေသိမ့်လိုက်ပါတယ်။ ဆိုသာဆိုရတယ် ကော်ပီသီချင်းကြီးဆိုလေတော့ တရုတ်ပြည်မှာဆို အော်ပြီး မဆိုရဲဘူး။ စင်ကျားပေါ ရောက်တော့မှ ရေချိုးခန်းထဲ အပြတ်ဟဲတာ။ စင်ကျားပေါသာရောက်တယ် တစ်ရက်မှ ကောင်းကောင်းမနားလိုက်ရဘူး၊ ကိုင်ထားတဲ့ ကဒ်က သက်တမ်းက ကုန်ခါနည်းတော့ တိုးရတာက တစ်လုပ်၊ ရုံးကိုဝင် သတင်းပို့၊ ခွင့်လက်မှတ်ထိုး၊ အဲ့ဒါကလည်း အချိန်မနည်းပုတ်သွားသေးတယ်။ ဒါတောင် စင်ကျားပေါ မရောက်ခင်ကတည်းက ကြိုပြီး ရုံးက မမတွေကို မျက်နှာချိုသွေးထားလို့ သက်တမ်းတိုးတာ အတန်ငယ်မြန်တာ။
Posted by Aung Htut at 12/15/2011 05:37:00 PM 21 comments
Posted by Aung Htut at 12/15/2011 03:13:00 PM 8 comments
မီတာ ၇၆၀ ရှည်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဟူနန်ပြည်နယ်က လျှူယန် တံတားကြီးကတော့ လုံခြုံစိတ်ချရမှု့မရှိလို့ ဖြိုချလိုက်ပါတယ်။ လူရာပေါင်းများစွာဟာ ဒီတံတားကြီးကို ဖောက်ခွဲပြီးတော့ ၀ုန်းကနဲ ပြိုကျသွားတာတွေ၊ မီးခိုးတွေ အများကြီးတက်လာတာတွေကို ကြည့်ဖို့လာကြပါတယ်တဲ့။ ဒီ လျှူယန် တံတားကြီးဟာ ၁၉၉၄ခုနှစ်မှာ ချန်ရှပြည်မြို့ကို ဖြတ်ပြီးတော့ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒေသတွင်း အာဏာပိုင်တွေပြောသွားတာကတော့ ဒီတံတားကြီးကို အလွန်တရာ ပါးလွှာသော ဒီဇိုင်းဖြစ်အောင် ရေးဆွဲပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒီအတွက် သံမဏိကြိုးတွေကို အဓိက အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါကျတော့ ဒီသံမဏိကြိုးတွေဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားကို သံချေးတွေတက်လာတဲ့အပြင် အချို့ နေရာတွေမှာဆိုရင် ပြတ်တောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီတံတားကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတုန်းက ယာဉ်ပေါင်း ၃ သောင်းလောက်သာ တစ်နေ့ကို တံတားကို ဖြတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ ကားအစီးပေါင်း ၈ သောင်းကျော်အထိရှိလာပါတယ်။ တံတားအသစ်ကိုတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အသစ်ထပ်မံတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်း တရုတ်က သူ့တံတား သူဆောက်ပြီး သူ့ဟာသူ ပြန်ဖြိုတာတော့ ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့လေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံလာဆောက်ပေးပြီးရင်တော့ လှည့်ကြည့်မယ်တောင်မထင်။ ကွာလတီကလည်း မြင်ရတဲ့အတိုင်း။ အောက်က YouTube ကလစ်ကလေးမှာတော့ တံတားကြီးဖြိုချတာကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 12/14/2011 11:33:00 AM7comments
ဂျူဒီ အန်ဒါဆန်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနေတဲ့ အိမ်ကလေးကတော့ တစ်ကယ့်ကို သစ်ပင်တွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အိမ်ကလေးပါ။ ဗာဂျီးနီးယား နံရံကပ်ပင် (Virginia Creeper)ကလေးတွေ သူ့မရဲ့ အိမ်နံရံတစ်လျှောက်လုံးကို တွယ်ပေါက်နေပြီးတော့ ပြုတင်းပေါက်တွေပါ နေရောင်ခြည် မ၀င်နိုင်လောက်အောင်ကို အတော်များပြားနေပါသတဲ့။ သူမကတော့ “တစ်ကယ့်ကို သစ်ပင်အိမ်ကလေးပါပဲလို့” ပြောသွားပါသေးတယ်။
“ကျွန်မ ပြုတင်းပေါက်ကိုလည်း ကြည့်ပါဦး သစ်ရွက်တွေနဲ့ပြည့်လို့ နေရောင်နည်းနည်းပဲ ၀င်တော့တယ်လို့” သူမကဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာတော့ အရိပ်ရပြီး အေးအေးလေးနေလို့ရပေမယ့် အလင်းရောင်လုံလောက်မှု့မရှိပါဘူးတဲ့။ အလင်းရောင်မလောက်တော့ နေ့ခင်းဖက်တွေမှာပါ အိမ်ထဲ မီးထွန်းထားရပါသတဲ့။ အန်ဒါဆန်ကတော့ တစ်နှစ်ကို နှစ်ခါလောက် ပြုတင်းပေါက်ကနေ ကိုယ်ကလေးထွက်ပြီး သစ်ရွက် သစ်မြစ်တွေကို နာရီအနည်းငယ်လောက် ရှင်းလင်းပါသတဲ့။ “ဒီလို အပင်ကလေးတွေရှိနေတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ နွေဦးရောက်ရင် အရမ်းလှတာပါပဲရှင်” လို့ ဂျူဒီ အင်ဒါဆင်က ပြောဆိုသွားပါသေးသတဲ့။
အင်း လှတော့ လှတယ်ပေါ့လေ.. တစ်အိမ်လုံး မှောင်မည်းနေမှာရယ်၊ မြွေတို့၊ ကင်းတို့သာ အဲ့ဒီကြားထဲ အသိုက်ဆောက်နေလို့ကတော့ မတွေးဝံစရာ။
Posted by Aung Htut at 12/14/2011 01:50:00 AM4comments
စင်ကာပူ အလွဲများဆိုခေါင်းစဉ်က တပ်လိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ လွဲတာတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် လွဲကြ၊ နောက်ကြတာလေးတွေ အမှတ်တရ အဖြစ်ရေးလိုက်တာပါ။
မှန်မချနဲ့ ကိုယ့်လူ အတူတူပဲ
ဒါက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ ဖြစ်ပုံလေး။ သူက မြန်မာပြည်ကနေ စင်ကာပူကို ပထမဆုံးလာတာပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်းလာလည်ပြီဆိုရင် အားတဲ့လူက သွားပြီးကြိုကြတယ်။ သူလည်း စင်ကာပူရောက်ရော ထုံးစံအတိုင်း ပတ်စ်စပို့ပြ ဗီဇာပြ၊ အိတ်တွေဘာတွေ ဆွဲပြီး ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ ထွက်လာတာပေါ့။ မှတ်မိသေးတယ် အဲ့ဒီနေ့က မိုးလေးက ခပ်ဖွဲဖွဲရွာနေတာကိုး။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း သူငယ်ချင်းအတွက် ဖုန်းဆင်းမ်ကဒ်တစ်ကဒ်ရယ်၊ နိုင်ငံခြားခေါ်ဖို့ ဖုန်းကဒ်ရယ် ယူသွားတာပေါ့လေ။ ဒီလိုနဲ့ လေဆိပ်ကအထွက် တက်စီ ပေါ်တက် ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူတူ အိမ်ကို သွားကြတာပေါ့။ တက်စီကလည်း အဲကွန်းလေး အေးနေအောင်ဖွင့်ပြီး မောင်းသပေါ့ဗျာ။ လမ်းရောက်တော့ သူငယ်ချင်းက သူရောက်ကြောင်းကို သူ့အိမ်ကို လှမ်းပြီး ဖုန်းခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဒီဟာသလေးက စတာ။
“အဖေ ကျွန်တော်ရောက်ပြီဗျ”…. “အင်း အားလုံး အဆင်ပြေတယ် အဖေ…..” “ဟဲလို ဟဲလို…. အဖေ သိပ်မကြားရဘူး……..” ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းက မှန်ကိုချ ခေါင်းကို မှန်အပြင်နည်းနည်းထုတ်ပြီး ပြောသဗျ။
တက်စီ ဆရာကလည်း မှန်ကို ပြန်တင်ပြီး ဆက်မောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပြုံးစိပြုံးစိ။
သူငယ်ချင်းကလည်း မရဘူး စိတ်ကြီးတယ်၊ ဖုန်းလိုင်း သိပ်မကြားရတိုင်း မှန်ချည်းဘဲ ပြန်ပြန်ချပြီး ခေါင်းထုတ်ထုတ်ပြောသကိုး…. ကြာလာတော့ တက်စီဆရာလည်း တင်းလာတယ်ထင်ပါ့….
“ဒီမှာကိုယ့်လူ ဒီနိုင်ငံမှာ ဖုန်းလိုင်းက နေရာတကာမိတယ်၊ မှန်ချပြီးပြောစရာမလိုဘူး….” ဆိုလေတော့မှ သူလည်း သတိရသွားတော့တယ်.. ဟုတ်သား ဟိုဘက်က လိုင်းမကောင်းတာထင်ပ၊ သူ့ဖုန်းသူပြန်ကြည့်တော့ လိုင်းမိ၊ မမိပြထားတဲ့ တိုင်လေးက အပြည့်.. အဲ့သလို။
နို့… ဟိုမှာက အသားကျနေပြီပဲဟာကို လိုင်းက ဟိုနေရာမိတစ်ချက်၊ ဒီနေရာမိတစ်ချက်ဆိုတော့ သူလည်း အကျင့်ပါသွားတာ။ ခုတော့ သူလည်း နောက်ဆို မှန်ချချပြီးတော့ ဖုန်းမပြောတော့ဘူး။
Posted by Aung Htut at 12/13/2011 11:33:00 AM 11 comments
စင်ကျားပေါ ပြန်ခြေချလိုက်တော့ ပူပါတယ်။ ဟိုကလာတုန်းက သုည လောက်အေးနေတဲ့အချိန် ဒီရောက်တော့ ၂၆ ဒီဂရီလောက် ဖြစ်နေတော့ တစ်ကိုယ်လုံး ပူတက်နေလို့ ရေလည်း မချိုးရဲ၊ မျက်နှာလည်း မသစ်ရဲ။ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ ကျွန်တော့် အရင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရုံးက အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့မွေးနေ့ရယ်၊ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေရယ်နဲ့ ၀ိုင်းလိုက်တာတင် တော်တော်ညနက်သွားပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ မနက်ရောက်တော့ ယူနီဗာဆယ် ကိုသွားဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူပေါ့။
Posted by Aung Htut at 12/12/2011 02:22:00 PM6comments
ဒီမြို့ကလေးကို ရောက်တာပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလောက်က။ ခုဆို ၁၁ လနီးပါးလောက်ရှိပြီထင်ပါ့။ မနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့ ဒီမြို့ကလေးကို ခွဲခဲ့ရပါတော့မယ်။ နန်တုန်(Nantong) ဆိုတာက ရှန်ဟိုင်းကနေ ၂ နာရီလောက် ကားစီးရင် ရောက်ပါတယ်။ မြို့ကလေးမှာက လူဦးရေ ၇ သန်းကျော်ကျော်ရှိတယ်။ ရန်ကုန်လောက် မကြီးပေမယ့် သူ့ဟာနဲ့ သူတော့ ကြီးမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တိုက်တွေကတော့ ရန်ကုန်ထက်ပိုမြင့်ပြီး ပိုကြီးမယ်ထင်တယ်။
နန်တုန်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်လောက်ကမှ တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာတဲ့ မြို့တစ်မြို့။ ရှန်ဟိုင်းတို့ ဘေဂျင်းတို့လိုမျိုး လူတွေ ပြွတ်သိပ်ပြီးတော့ ရှုပ်ရှက်လည်း ခတ်မနေလှပါဘူး။ သူ့ဟာသူ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ နေချင့်စဖွယ်မြို့ကလေး။ စူကျိုးတံတားသစ်ဖွင့်လိုက်တော့ နန်တုန်မြို့ဟာ ရှန်ဟိုင်း ဧရိယာထဲကို လက်လှမ်းမှီတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 12/08/2011 08:55:00 PM 12 comments
ထီဆုကြီးပေါက်ဖို့ ခွေးကလေးတွေရဲ့ အီးအီး အပြိုင်ကောက်ကြစို့
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကလမ်းတွေ သန့်ရှင်းစေဖို့အတွက် ခုတော့ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားတွေဟာ ခွေး အီအီးတွေကို အပြိုင်ကောက်နေကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီခွေးအီအီးကောက်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပထမဆုကို လိုချင်ကြလိုပါတဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လက စတင်ခဲ့တဲ့ ဒီထီဖွင့်ပွဲကို New Taipei City က နိုင်ငံသား အယောက် ၄၀၀၀ ကျော်ဟာ ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီးပါပြီ။ ဒီ ထီပေါက်စဉ်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဆုကတော့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တန်(ထိုင်ဝမ်ငွေ ၆ သောင်းတန်) ရွှေ ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထီလက်မှတ်လိုချင်ရင် ခွေးအီအီး တစ်ထုပ်နဲ့ လဲယူလို့ရပါသတဲ့။ ခုတော့ ခွေးအီအီးအထုပ်ပေါင်း တစ်သောင်း လေးထောင်ကျော်ကို လက်ခံရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ မြို့တော် ၀န်းကျင် သန့်ရှင်းရေး ဗျူရိုရဲ့ ၀န်ထမ်း မလိုင်လျှမ် ကတော့ “အခု ကျွန်မတို့ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးတော့ကို အောင်မြင်မှု့ရပါတယ်” လို့AFP သတင်းဋ္ဌာနကို ပြောသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ဒီလို စနစ်လေးကျင့်သုံးရင် အများကြီးပို တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 12/07/2011 10:43:00 PM6comments
၁။ ဦးနှောက် သည် မီးခိုးရောင်
တစ်ကယ်တော့ ဦးနှောက်ဟာ မီးခိုးရောင် တစ်ခုထဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမဲရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့် အနီရောင် စတဲ့ အရောင်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဟာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပေမယ့် သူ့မှာ အဖြူရောင်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နောက် အမည်းရောင် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလည်းပါဝင်ပြီးတော့ အနီရောင် သွေးကြောတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့ ဦးနှောက်တွေဟာ ပိုးသတ်ဖို့နဲ့ မပုတ်မသိုးအောင် တာရှည်ခံရန်အသုံးပြုတဲ့ ဆေးရည်တွေ ကြောင့် မီးခိုးရောင်သာ မြင်ရတာပါ။
Posted by Aung Htut at 12/07/2011 02:11:00 PM4comments
ရိုလာကိုစတာဆိုရင် မွေလိမ်မွေကောက် ရထားလမ်းတစ်လျှောက် ဝေဟင်ထဲရောက်နေသလို မိုးပျံရထားနဲ့ သည်းတထိတ်ထိတ် ရင်တဖိုဖို စီးရတာမို့ အသည်းငယ်သူများကတော့ စီးရမှာ မချင့်မရဲ့ ဖြစ်ကြမှာပါ။ ဒီလိုမျိုးအတွက်တော့ မပူပါနဲ့။ ရိုလာကိုစတာ လှေကားကို ဂျာမနီနိုင်ငံ Duisburg မှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ ဒီ ရိုလာကိုစတာလှေကားကို ဒီဇိုင်နာ Heike Mutter and Ulrich Genth တို့က ထွင်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ကျားနှင့်လိပ်လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ၄၅ မီတာမြင့်တဲ့ ဒီလှေကားမှာ လှေကားထစ်ပေါင်း ၂၄၉ ထစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့် စိတ်ကြိုက် အရှိန်နဲ့ သင့် စိတ်ကြိုက်ပုံစံ လမ်းလျှောက်နိုင်လို့ ရိုလာကိုစတာ လျှောက်သူတွေလည်း အသည်းငယ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
ဒီ ရိုလာကိုစကာလှေကားဟာ ဂျာမနီက အသုံးမပြုတော့တဲ့ မိုင်းတွင်း အဟောင်းကြီး အပေါ်မှာ ရှိတာပါတဲ့။ ဒီတံတားကို တည်ဆောက်ဖို့ သံတန်ပေါင်း ၁၂၀ လောက် ကုန်ပါသတဲ့။ ညအချိန်ကျရင်တော့ မီးလုံးလေးတွေကို လှေကားလက်ရန်းတစ်လျှောက် အလှဆင် ထွန်းထားပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 12/06/2011 03:06:00 PM9comments
အလွဲဆိုတာကတော့ လူတိုင်းလွဲ တတ်ကြတာကိုး။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကြ နောက်ကျ လွဲကြတဲ့ မှတ်မှတ်ရရလေးတွေကို ဖြစ်လို့။ ဒီအထဲက ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ ရှိတဲ့ အလွဲလေးတွေကို အမှတ်တရအဖြစ် ပိုစ်တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် အဖေနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ရဲ့ ကျောင်းတုန်းက အဖြစ်အပျက်ကလေးပါ။ တစ်နေ့တော့ အဖေရယ်၊ သူ့ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရယ် မြို့ထဲသွားပြီး ဒန်ပေါက်စားကြလေသတဲ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရန်ကုန်သား လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ယောက်ကတော့ နယ်ကခင်ဗျ။ နယ်ကဆိုတော့ သူတစ်ခါမှ ဒန်ပေါက်မစားဖူးသေးဖူး။ ဒါ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့အတူ ပထမဆုံးစားဖူးတာ။ ဟိုရောက်တော့ ဟေ့ ဒန်ပေါက် သုံးပွဲ စားမယ်ဟေ့ပေါ့လေ။ ဟော ဒန်ပေါက်လည်းရောက်လာရော ရန်ကုန်သား သူငယ်ချင်းက နယ်က သူ့သူငယ်ချင်းကို မေးပါသတဲ့။
“ဟေ့ကောင် ငါ့ ဒန်ပေါက်ထဲမှာ ကြက်သားတုံးကြီး ဒန်ပေါက်ထမင်းထဲ မြှပ်ပြီး ပါလာသကွ၊ မင်းဆီမှာရော”
အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ နယ်ကသူငယ်ချင်းကလည်း သူ့ဒန်ပေါက် ထမင်းကို နည်းနည်းလေးဖယ်ကြည့်လေတော့ “ဟရောင်ရေ…. ငါ့ဆီမှာလည်း ပေါင်တုံးအကြီးကြီးပဲလို့” ထအော်ပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ ရန်ကုန်သား သူငယ်ချင်းက
“ဟကောင်ရ ဖြေးဖြေးပြော သူများတွေကြားကုန်ဦးမယ်၊ မင်းနဲ့ငါက ကံကောင်းလို့ပါတာ၊ တော်ကြာသူများတွေသိသွားရင် ဒုက္ခ” ဆိုလေတော့ နယ်က သူငယ်ချင်းခမျာလည်း ဒန်ပေါက်ကို ၀၀ မစားရရှာပဲ ကြက်သားတုံးကို လူမမြင်အောင် ထမင်းလေးနဲ့ ဖုံးလိုက် နည်းနည်းလေးဖယ်လိုက် ဖဲ့စားလိုက်ပေါ့လေ။ နောက်ဆုံး မအောင့်နိုင်တော့ ၀ါးလုံးကွဲရယ်ကြတော့မှ နယ်သားသူငယ်ချင်းလည်း စိတ်တွေဆိုးတာပေါ့လေ။ စိတ်ဆိုးလေတော့ စိတ်အဆိုးပြေအောင်ရယ်ဆိုပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ခေါ်ပြပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 12/01/2011 01:21:00 PM9comments
သင်ထင်သလို မဟုတ်သော သင့် ဦးနှောက်အပေါ် ယူဆချက် ၇ ခု...